Uyijonga njani iThebhu yokuSebenza yePC yakho
IWindows iyakwenza ukuba ujonge izixhobo zePC yakho ukuqinisekisa ukuba zisetyenziselwa ezona zinto zibalaseleyo kwiPC yakho. Esona sixhobo silula sokujonga intsebenzo yithebhu yokusebenza efumaneka kwiWindows Task Manager. Ukujonga le nto, landela la manyathelo:
Cinezela u-Ctrl + Esc ukuzisa iwindows Task Manager.
Cofa kwiTebhu yokuSebenza.
Ithebhu yokuSebenza ibonisiwe apha.
Umphathi weSebenzi weSithuba sokuSebenza.
Isithuba sokusebenza sidwelisa izixhobo eziphambili njengezithonjana kwicala lasekhohlo lewindows. Apha, ubona amangeniso amabini ezixhobo zokugcina ezifumaneka kwiPC. Ukabona into yeBluetooth. Ayizizo zonke ezi zinto zingenisiweyo, okanye mhlawumbi nangaphezulu, eziya kubonakala kwiscreen sakho, kuxhomekeka kwizixhobo ezikhoyo.
Ukujonga udidi lomsebenzi wecandelo elahlukileyo, khetha i-thumbnail kwicala lasekhohlo lefestile. Igrafu iyatshintsha ngokuhamba kwexesha, uskrole ukusuka ekunene uye ekhohlo. Ukuphakama komgca kwigrafu, kokukhona ubutyebi busetyenziswa okanye busetyenziswa.
Imitha ye-CPU ikuxelela ukuba kungakanani ukusetyenziswa kwamandla okusebenza kwehashe. Apha, amaxabiso asezantsi, oko kuthetha ukuba iWindows ayenzi kangako. Ukuba inani beliphezulu, okanye ngequbuliso lifakile, oko kuthetha ukuba umsebenzi omninzi uyenzeka, njengomsebenzi ongasemva okanye inkonzo.
Imitha yememori ilandelela ukuba ingakanani imemori esetyenziswayo. Le nto iyatshintsha njengoko usebenzisa iinkqubo. Umzekelo, ukusebenzisa umhleli weefoto kunokutya isixa esikhulu sememori, kodwa iThebhu yokuSebenza iya kubonisa elo nani lememori likhululwe emva kokuba uphume kwinkqubo.
Izinto zeDiski zibonisa umsebenzi wokugcina. I-Ethernet ibonisa umsebenzi wenethiwekhi. Kule PC, iadaptha yeBluetooth nayo ijongiwe.
Ukuba ufuna iinkcukacha ezithe kratya, sebenzisa iMboniselo yoNcedo. Njengondlela-mfutshane, cofa indawo evulekileyo yokujonga iliso lezixhobo, ebekwe ezantsi kwethebhu yokusebenza yoMphathi woMsebenzi.
i-promethazine ene-codeine dosing
Ngaba uyacwangcisa b ukuba wenze ixesha lakho emva kwexesha
isilwanyana sokucoca ngesandla esincinci
I-famotidine 20 mg ithebhulethi